ရသအတွေး: ကျွန်တော်နှင့် ၀ိပဿနာ
ဓမ္မဆောင်းပါးများ-ကာတွန်း-၀တ္ထုတို-ကွန်ပျူတာအကြောင်း ဘ၀ ဒဿန အညတရ ရသကဗျာများ
ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးချင်နေတာကြာပါပြီ။ ၀ိပဿနာကို မင်းကဘယ်လောက်သိသလဲ မေးစရာ တော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသိသလောက်ပဲရေးတာပါပဲ။ ကျင့်သိနဲ့ရတဲ့ဘာဝနာပါ။ စာကတော့ ကျွန်တော်လည်းမတတ်ပါဘူး။ ပါဠိစာတွေကိုတော့ ဆရာတော်တွေကိုမေးမြန်းရပါတယ်။ ခုလူငယ်တော် တော်များများဟာ Online မှာအချိန်ဖြုန်းကြပါတယ်။ ၀ိပဿနာဆိုတာ လူကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာ၊ ငါတို့နဲ့လာလားမှမသက်ဆိုင် ဆိုပြီးနေနေကြဟန်တူပါတယ်။ Facebook - G talk Chatting တွေမှာပျော် နေကြပုံရပါတယ်။ ဒါတွေဟာအလကားပါလို့လည်းဆိုလိုပုံပေါ်ပါတယ်။ အရွယ်သုံးပါးဆိုတာမရှိပါဘူး။ ပထမအရွယ်၊ ဒုတိယအရွယ်၊ တတိယအရွယ် မရောက်မှီ သေပြီ။ ကင်ဆာ၊ TB၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ လေငန်း စတာတွေဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့ဖြစ်လာနေကြပါပြီ။ ဩကာသ ကန်တော့ချိုးလောက်နဲ့ ကျေနပ်မယ်ဆိုရင် (ဆရာတော်ဦးကောသလ္လပြောသလို) ပန်းတင်ခုံနဲ့ပဲ ဘ၀အဆုံးသတ်သွားပါမယ်။ သီလအတွက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုမျှနှင့် အပါယ်လေးဘုံက(ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကယ်) မလွတ်နိုင်ပါ။ ကုသိုလ် အားကြီး၍ နတ်ဘုံရောက်သော်လည်း ကုသိုလ်ကံ အရှိန်ကုန်သော် အကျမသက်သာပေ။ ၀ိပဿနာသည် မိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ် မှသာရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဘ၀မှာကပင် ပါရမီ ပြည့်ဝသူဖြစ်ပါတယ်။ ရသေ့ဘ၀မှာတွင်ပင် နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင် ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဝေနေယျသတ္တ၀ါတို့အား သနားဂရုဏာသက်စွာဖြင့် ဘုရားဆုကိုပန်ကာ ပါရမီဖြည့် ကျင့်တော်မူတယ်။ လေးအသေင်္ချောနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါကတော့ နှစ်အသေင်္ချောနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါ။ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိတာချင်းတူတူမြတ်စွာဘုရားရှင်က ပါရမီပိုဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်။ သစ္စာလေးပါးတရားကတော့
(၄) နိရောဓသစ္စာ တို့ပဲဖြစ်တယ်။
ထိုသစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲဟောကြားတော်မူတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါက သိသော်လည်း ဟောကြာခြင်းမရှိပေ။ ဒါကမိတ်ဆက်
တရားစထိုင်မည့်သူများသည် မိမိတို့အားသန်ရာ အားထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအားထုတ်သလဲ ရိပ်သာစသည်များတွင် (၇) ရက်၊ (၁၀) ရက် စသည်ဖြင့်နည်းနာယူအားထုတ်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် မရပါက စမှတ်တဲ့နည်းလေးကလွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ၀င်လေထွက်လေကိုစမှတ်ပါ။ ဘယ်လိုမှတ်သလဲ ဆိုတော့ ညင်သာတဲ့ အသက်ရူသွင်းလိုက်တဲ့ အခါ လေ၀င်သွားတာကိုသိ၊ ရူထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ထွက်သွားတဲ့ လေကိုသိ၊ ဒါပါပဲ။ စစချင်းမှတ်ရတာမလွယ်ပါ။ နောက်ကြာလာတဲ့ခါမှာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ စိတ္တာနုပဿနာနည်းပေါ့။ ကသစ်ဝိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နည်းကတော့ ပူတာ၊ အေးတာ၊ လှုပ်တာ၊ ဆင်းရဲတာ၊ ချမ်းသာတာ ၎င်းငါးမျိုးကို ကာယာနုပဿနာ၊ ဓမ္မာနုပဿနာ၊ ဝေဒနာနုပဿနာ လေးမျိုးသောသတိပဌာန်တရား လေးပါးရှိပါတယ်။ ၀င်လေထွက်လေကအလွယ်ကူဆုံး နည်းပါ။ သမာဓိရအောင်မှတ်တာပါ။ ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကတော့ ဖြည်းဖြည်းခြင်း သိလာပါမယ်။ ယုံကြည်မှု သည်သာအဓိကပါ (သဒ္ဒါတရား)။
Posted by ရသအတွေး at 9:00 PM
ရှုခင်းတစ်ခုကို အဝေးကသာကြည့်ပါ။ ထိုရှုခင်းရဲ့အတွင်းသင်ရောက်သွား ပါက အရင် သင်ရပ်ကြည့်ခဲ့သောနေရာသည် ရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြန်သည်။
မိတ်ဆွေ မော်မကြည့်လျှင်နေပါစေ၊ ငုံ့မကြည့်ပါနဲ့၊ ရှေ့တည့်တည့် ကိုတော့ကြည့်ပေးပါ။
နောင်တ နဲ့ သံဝေဂ၊
မြင်ခဲ့ဘူးသောသရဲ တစ္ဆေ နှင့် ခြောက်ခံရသော သရဲ တစ္ဆေ ၁
သရဲ၊ တစ္ဆေအကြောင်း ပြောပါဆိုလျှင် ကျတော်ငယ်စဉ် လေးတန်းကျောင်းသားဘ၀က စရပါမယ်။ လေးတန်းကျောင်းသားဘ၀က သူရဲ တစ်ခါမြင် ဘူးပါသည်။ ထိုသရဲ (ငယ်ငယ်ကအေ...
ရှောက်ခါးသီး ( citron )
Google Image ရှောက်ခါးသီးကိုတော့ မြင်ရခဲပါတယ်။ ရှားလည်းရှားပါတယ်။ အသုံးဝင်တာ ကတော့ လေရောဂါသမားများ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေစဖြတ်ကာစသူများ ...
Ginger ဂျင်း၏ အသုံးဝင်ပုံ
Google Image ဂျင်းရဲ့ ဆေးဘက်ဝင်ပုံကို စာစောင်တစ်ခုမှာ ရေးထားတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထိုစာစောင်တွင် ရေးထားသည်မှာ မပြည့်စုံသေးပါ။ ကျတော် ငယ်ငယ်...
အညတရ ဒဿန (3)
- ခြောက်ပြစ်ကင်း တစ်ခါကရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်(ကြေးမြင့်တိုင်) အမျိုးသမီးကျောင်း ဆုပေးပွဲတွင် ငွေတိုက်ဘဏ်တိုက် ဘက်၌ကျွမ်း ကျင်သော ဦးခင်အမည်ရှိသူ ကျွန်ုပ်...
USA မှ ကိုကြီးကျောက်
၄၇လက်မရှည်တဲ့ လူပေါင်ရိုးတဲ့လား? အဟတ်အဟတ် - အောင်နိုင်စောအမည်ရှိ စင်္ကာပူမှ ဧဝံဂေလိထမင်းမငတ်ဂါထာရွတ်လျှက်ရှိသော ခရစ်ရှန်တစ်ဦးသည် ကျွန်တော်A-Bombကို ထိပ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝံ့သော သတ္တိမရှိလတ္တံ့။ ထို့...
အဆွယ်ကောင်း၍ ခိုအောင်းသူများသို့ (၆) - ခရစ်ယာန်များမှ ဓါးမဆရာများနှင့် စိတ်ကူးယဉ် ကရူးဆိတ် ၀ါဒီများက မြန်မာနိုင်ငံအား ခရစ် ယာန်နိုင်ငံ အဖြစ် စိတ်ကူးယဉ် ပုံဖေါ်လျှက် ကြိုးစားနေရာတွင်-ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တ...
(c)2010 ရသအတွေး. Designed by Blogger Templates. Supported by SUV, Trucks, Free Bingo